Zuva Rokutongwa—Chii? (Uyewo, “Zuva Rokutongwa”) | Bhaibheri Rinodzidzisei?
UNOFUNGIDZIRA kuti Zuva Rokutongwa richange rakaita sei? Vakawanda vanofunga kuti mabhiriyoni evanhu achaunzwa pamberi pechigaro choumambo chaMwari akaita mudungwe. Ipapo, munhu oga oga achatongwa. Vamwe vachapiwa mubayiro weparadhiso yokudenga, uye vamwe vachatongerwa kutambudzwa kusingagumi. Zvisinei, Bhaibheri rinoratidza zvakasiyana chaizvo pamusoro penguva iyi. Shoko raMwari rinoirondedzera senguva yetariro uye yokugadzirisa zvinhu, kwete senguva inotyisa.
Pana Zvakazarurwa 20:11, 12, tinoverenga tsanangudzo yomuapostora Johani yeZuva Rokutongwa, inoti: “Ndakaona chigaro choumambo chikuru chichena naiye akanga agere pachiri. Denga nenyika zvakatiza pamberi pake, uye hazvina kuwanirwa nzvimbo. Ndakaona vakafa, vakuru nevaduku, vamire pamberi pechigaro choumambo, uye mipumburu yakavhurwa. Asi mumwe mupumburu wakavhurwa; ndiwo mupumburu woupenyu. Vakafa vakatongwa nezvinhu zviya zvakanga zvakanyorwa mumipumburu maererano nemabasa avo.” Mutongi anotsanangurwa pano ndiani?
Jehovha Mwari ndiye Mutongi mukuru wevanhu anopfuura vose. Zvisinei, anopa vamwe basa racho chairo rokutonga. Maererano naMabasa 17:31, muapostora Pauro akataura kuti Mwari “akatara zuva raanoda kutonga naro nyika inogarwa, nokururama achishandisa munhu waakagadza.” Mutongi uyu akagadzwa ndiJesu Kristu akamutswa. (Johani 5:22) Zvisinei, Zuva Rokutongwa rinotanga rini? Rakareba zvakadini?
Bhuku raZvakazarurwa rinoratidza kuti Zuva Rokutongwa rinotanga pashure pehondo yeAmagedhoni, mamiriro ezvinhu aSatani ari panyika paanenge aparadzwa. * (Zvakazarurwa 16:14, 16; 19:19–20:3) Pashure peAmagedhoni, Satani nemadhimoni ake vachaiswa mujeri mugomba rakadzikadzika kwemakore ane chiuru. Munguva iyoyo, vagari venhaka vokudenga vane 144 000 vachava vatongi uye vachatonga “semadzimambo naKristu kwemakore ane chiuru.” (Zvakazarurwa 14:1-3; 20:1-4; VaRoma 8:17) Zuva Rokutongwa harisi chiitiko chichakurumidza kuitwa chakangoreba maawa 24. Rinotora makore ane chiuru.
Munguva iyoyo yemakore ane chiuru, Jesu Kristu “achatonga vapenyu nevakafa.” (2 Timoti 4:1) “Vapenyu” vachange vari “boka guru revanhu” vanopona paAmagedhoni. (Zvakazarurwa 7:9-17) Muapostora Johani akaonawo “vakafa . . . vamire pamberi pechigaro choumambo” chokutonga. Sezvakapikirwa naJesu, achishandisa rumuko, “vari mumakuva vachayeukwa uye vachanzwa inzwi [raKristu], vobuda.” (Johani 5:28, 29; Mabasa 24:15) Asi vose vachatongerwa chii?
Maererano nezvakaratidzwa muapostora Johani, “mipumburu yakavhurwa,” uye “vakafa vakatongwa nezvinhu zviya zvakanga zvakanyorwa mumipumburu maererano nemabasa avo.” Mipumburu iyi zvinhu zvakanyorwa zvakaitwa kare nevanhu vacho here? Kwete, kutonga kwacho hakuzoitwi nokuda kwezvakaitwa nevanhu vasati vafa. Tinoziva sei izvozvo? Bhaibheri rinoti: “Uya anenge afa asunungurwa pachivi chake.” (VaRoma 6:7) Saka vaya vanomutswa vanodzoka kuupenyu vadzimirwa zvivi zvavo zvose. Naizvozvo, mipumburu inofanira kumirira zvimwe zvinodiwa naMwari. Kuti vanopona paAmagedhoni uye vaya vanomutswa vararame nokusingaperi, vachafanira kuteerera mirayiro yaMwari, kusanganisira zvimwe zvitsva zvichange zvichidiwa izvo Jehovha angazivisa mumakore ane chiuru. Saka, vanhu vachatongerwa zvavachaita munguva yeZuva Rokutongwa.
Zuva Rokutongwa richapa mabhiriyoni evanhu mukana wavo wokutanga wokuti vadzidze zvinodiwa naMwari uye kuti vaite maererano nazvo. Izvi zvinoreva kuti pachava nebasa guru rokudzidzisa. Zvechokwadi, “vagari vomunyika inobereka vachadzidza kururama.” (Isaya 26:9) Zvisinei, havasi vose vanenge vachida kuita maererano nezvinoda Mwari. Isaya 26:10 inoti: “Kunyange munhu akaipa akanzwirwa nyasha, haazombodzidzi kururama. Achaita zvisina kururama munyika yokururama uye haazooni ukuru hwaJehovha.” Vakaipa ava vachaurayiwa zvachose munguva yeZuva Rokutongwa.—Isaya 65:20.
Panozopera Zuva Rokutongwa, vanhu vanopona vanenge ‘vava vapenyu’ zvizere sevanhu vakakwana. (Zvakazarurwa 20:5) Saka munguva yeZuva Rokutongwa vanhu vachadzorerwa pakukwana kwaivapo pakutanga. (1 VaKorinde 15:24-28) Panguva iyoyo pachava nomuedzo wokupedzisira. Satani achasunungurwa mujeri rake, obvumirwa kuedza kutsausa vanhu kokupedzisira. (Zvakazarurwa 20:3, 7-10) Vaya vanomurwisa vachawana kuzadzika kuzere kwechipikirwa cheBhaibheri chinoti: “Vakarurama vachagara nhaka yenyika, vachagara mairi nokusingaperi.” (Pisarema 37:29) Chokwadi, Zuva Rokutongwa richava chikomborero kuvanhu vose vakatendeka!
^ ndima 1 NezveAmagedhoni, tapota ona Insight on the Scriptures, Volume 1, mapeji 594-5, 1037-8, uye chitsauko 20 chebhuku rinonzi Namata Mwari Wechokwadi Bedzi, ose akabudiswa neZvapupu zvaJehovha.